ဓမ္မပညာအထောဓမ္မပညာအထောက်အကူပြု လစဉ်စာစောင် - ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၀၁၃
ျRev Chowkee, ချောမိ
ယေရုဆလင်မြို့ကြီးနှင့်နွားစားခွက် - ညီအစ်ကိုကြီးဦးတင်မောင်ထွန်း
သန့်ရှင်းခြင်းအသက်တာရှိပါ - ညီအစ်ကိုဦးကပ်ခန့်ခုပ်
ကိုယ်တော်၌အသက်တာကိုဆပ်ကပ်အပ်နှံ၍ - ညီအစ်ကိုဦးယောသပ်
သမ္မာတရား၏အဆက်ဖြစ်ဖို့ - ညီအစ်ကိုဦးတင်မောင်ကြည်
ကျေးဇူးတော်ကိုသိမှတ်၍ချီးမွမ်းပါ - ညီအစ်ကိုအုတ်မာ
Read more: ဓမ္မပညာအထောဓမ္မပညာအထောက်အကူပြု လစဉ်စာစောင် -...
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာက မြန်မာပြည်ရဲ့ ဆေးရုံကြီးတခုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဆေးရုံမှာ ကျွန်တော်ရဲ့ဖခင်ဟာ လူပျိုဘ၀နဲ့ ဆရာဝန်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ အချိန်ပါ။ အဲဒီအချိန်တုန်းက ဆရာဝန်ဆိုတာ ရွှေလို ရှားပါးတဲ့ ခေတ်အချိန်အခါလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တနိုင်ငံလုံးရဲ့ အမြင့်ဆုံးပညာဖြစ်တဲ့ ဆေးပညာကို
Read more: ဦးနှောက်နှင့်နှလုံးသား (လှမင်းသူ)
ပျော်ရွှင်သောခရစ်စမတ်ဖြစ်ပါစေ ...သခင့်စကားဝိညာဉ်ရေးရာစာစောင် အမှတ်၁၃၆ LW136 December 2012
LW 136 December 2012
ဒီဇင်ဘာ ဆောင်းတစ်ည (Happy Birthday Jesus )
ခရစ္စမတ်နေ့ F. Penny (mizo) တမူး
ခရစ္စမတ်အချိန် Mary (ဖျာပုံ)
နေ့သစ်ခွန်အား နန်းရထိုက် (က . န
Read more: ပျော်ရွှင်သောခရစ်စမတ်ဖြစ်ပါစေ...
နှင်းဆီဖြူ - စစ်ငြိမ်းဒိရေ
ကျနော် (စာရေးသူ) ရေးသားထားတဲ့ သရဲတစ္ဆေ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ “နှင်းဆီဖြူ” ပါဝင်တဲ့ E-book စာအုပ်ထွက်ပါပြီ။ ပါဝင် ရေးသားသူများကတော့ ကိုကိုသက်၊ ကိုမျိုး၊ ချစ်ကြည်အေး၊ ခိုင်စိုးလင်း၊ ချိုပိန်းနောင်၊ စစ်ငြိမ်းဒီရေ (ကျနော်)၊ ဆူးခက်မင်း၊
Read more: နှင်းဆီဖြူ - စစ်ငြိမ်းဒိရေ
မုရန်မဂ္ဂဇင်း အမှတ်(၄) ..အောက်တိုဘာ၂၀၁၂ ထွက်ပြီ
ခေါင်းစဉ်။ စာမျက်နှာ ၁
မုရန်သမိုင်း စာမျက်နှာ ၂-၃
မာတိကာ စာမျက်နှာ ၄
ဒေသနာ ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံခြင်း ...စောသြဂတ်စတပ်စ် (၅-၇)
ဝေငှချက်။ ပွဲတော်(၇)ပါး ... မျိုးသူ (၈-၁၂)
သက်သေခံချက်။ ဦးနှောက်နှင့်နှလုံးသား.. လှမင်းသူ (၁၃-၂၄)
ဝေငှချက်။ ကိုကွယ်ခြင်း..လှမင်းသူ (၂၄-၂၆)
Read more: မုရန်မဂ္ဂဇင်း အမှတ်(၄) ..အောက်တိုဘာ၂၀၁၂ ထွက်ပြီ
ဓမ္မပညာအထောက်အကူပြု လစဉ်ထုတ်စာစောင်၊ နိုဝင်ဘာ၂၀၁၂
ကျေးဇူးတော်များကိုအောက်မေ့ကြဖို့ရန် - ညီအစ်ကိုကြီးဦးတင်မောင်ထွန်း(Dr)
လောကီပုံသဏ္ဍန်မဆောင်ကြနှင့် - ညီအစ်ကိုဦးကပ်ခန့်ခုပ်
အသက်တာကိုဆင်ချင်နိုင်ဖို့ရန် - ညီအစ်ကိုဦးတင်မောင်ကြည်
မိမိကိုယ်ကိုပြင်ဆင်ကြဖို့ရန် - ဆရာဦးအောင်သက်ညွန့်
Read more: ဓမ္မပညာအထောက်အကူပြု လစဉ်ထုတ်စာစောင်၊ နိုဝင်ဘာ၂၀၁၂
ညစဉ်ခွန်အား- အဖိုးအို၊ ချောက်ဖီးနေ ဆိုသော အမေရိကန်အဖိုးကြီးတစ်ယောက် - ဆရာဆိုး
အဖိုးအို၊ ချောက်ဖီးနေ ဆိုသော အမေရိကန်အဖိုးကြီးတစ်ယောက်ကို တွေ့ရင် ဆင်းရဲသား၊ ငမွဲတစ်ယောက်ပဲဟု အောက်မေ့ကြသတဲ့။ အင်မတန်မှ ချိုးခြံချွေတာပြီး အိမ်ငှားနေရတဲ့ အသက်(၈၀)အဖိုးကြီးမှာ စားစရာကောင်းကောင်းမရှိပါဘူး။ ဘတ်စကား၊ အငှားကားနဲ့ပဲ သွားလာပြီး၊ သူပတ်ထားတဲ့နာရီကလည်း ဘူတာရုံက ဈေးသေးသေးမှာ ၀ယ်ခဲ့တဲ့
Read more: ညစဉ်ခွန်အား- အဖိုးအို၊ ချောက်ဖီးနေ ဆိုသော...
ခင်မျိုးချစ်၏ သတင်းစာလောက စာအုပ်အညွှန်း ဂျူနီယာဝင်း၊
အောက်တိုဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၂
စာအုပ်အမည် - သတင်းစာလောကရေးသူ - ဒေါ်ခင်မျိူးချစ် ပထမအကြိမ် - ၁၉၅၂ သြဂုတ်လ မြန်မာနိုင်ငံဘာသာပြန်စာပေအသင်းဒုတိယအကြိမ် - ၂၀၁၂ ဇွန်။ ရန်အောင်စာပေ အုပ်ရေ ၅၀၀၊ စာမျက်နှာ - ၂၃၀။ တန်ဖုိး - ၂၀၀၀ကျပ်
Read more: ခင်မျိုးချစ်၏ သတင်းစာလောက စာအုပ်အညွှန်း...
စကားချီးအနေဖြင့် ခရစ်တော်ဒုတိယအကြိမ် ကြွလာခြင်းကို လူအများစိတ်ဝင်စားစေရန်၊ ကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော် ကြွလာတော့မှာဖြစ်သောကြောင့် အသင့်ပြင်ဆင်နိုင်ရန်၊ သာဓုသစ္စာရှိသော ငယ်သားကောင်းဟု
Read more: ချီဆောင်ခြင်းနှင့်ဒုတိယကြွလာခြင်းစာအုပ်ငယ်၊...
ဘုရားသခင် ရောင်းပါသလား? .. တစ်ဒေါ်လာပဲတဲ့
ကောင်လေးငယ်တစ်ယောက် ဒေါ်လာတစ်ဒေါ်လာကိုင်ပြီး တစ်ဆိုင်ဝင် တစ်ဆိုင်ထွက်နဲ့ သူလိုချင်တဲ့အရာကို လိုက်မေးနေခဲ့တယ်။
Read more: ဘုရားသခင် ရောင်းပါသလား? .. တစ်ဒေါ်လာပဲတဲ့
လောကလူ့သက်တန်းနှစ် ၆၀၀၀ အတွင်းလူမျိုးတိုင်း၌ ချီးမြှောက်ကိုးကွယ်ခဲ့ကြသည့်ဘုရား ပေါင်းများစွာရှိပြီး ဘယ်ဘုရားကိုကိုးကွယ်ရမလဲ ? ဟုယခုခေတ်တွင် လေ့လာရှာဖွေရင်း ဘုရားစစ်ကိုမတွေ့ရပဲသေဆုံးသွားသော လူ များစွာရှိသလို ဘုရားစစ်ကိုရာရင်း စိတ်ရှုပ်ကာ မိရိုးဖလာရိုးရာကိုးကွယ်မှုထဲ
Read more: မာန်ငါးပါးကိုအောင်မြင်သောဘုရား
သခင့်စကား the Lord's Word No.133 Sep 2012
သခင့်စကား ၁၁ နှစ်ပြည့်သည့်တိုင် အစေခံခွင့် ပေးသော ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းပါသည်။
the Lord Word 133, Sep 2012. 11 th
Read more: သခင့်စကား the Lord's Word No.133 Sep 2012